[APK] Afaka misintona an'i Allo ianao izao, ny fampiharana fandefasan-kafatra vaovao an'ny Google | Androidsis
[APK] Efa manana Allo izahay, misintoma ny fampiharana fandefasan-kafatra Google vaovao izao
Nampanantena i Google fa hanana an'i Allo izahay talohan'ny nifaranan'ny fahavaratra, ary marina izao anio, amin'ny 21 septambra, rehefa nametraka ny fampiharana fandefasan-kafatra vaovao izay hiloka amin'ny Google Assistant ary ho fananana ara-pihetseham-po miaraka amina andiany tombony amin'ny emojis.
Ofisialy ny fampiharana chat vaovao ary ho anao izay mbola tsy mahita ny bokotra "Install" ao amin'ny Google Play Store, afaka misintona amin'ny avy eo ny APK hizaha ny fampiharana faharoa ho an'ny fifandraisana eo amin'ny olona natombok'i Mountain View aorian'ny Duo.
1 Azo alaina amin'ny fomba ofisialy izao i Allo
2 Manomboha amin'i Allo
Azo alaina amin'ny fomba ofisialy izao i Allo
Google dia namoaka aza a tranokala vaovao izay anazavany ireo toetra tsara sy tombontsoa rehetra ato amin'ity rindrambaiko ity izay miaraka amin'ny hevitra ady ankehitriny ho an'ny WhatsApp mifandray amin'ny laharana telefaona, afaka mandefa sy mahazo SMS ary manana eo amin'ny laharan'ny Google Assistant, iray amin'ireo serivisy anaovan'ny Google fitiavana sy ezaka bebe kokoa.
Eo izany mifandray amin'ny nomeraon-telefaonanao Ary efa natao ho an'ny smartphone izao. Ny fifandraisana rehetra izay mampiasa Allo dia haseho ho azy, ary ireo izay tsy manao izany dia azo entina amin'ny fampidinana ilay app.
El axis afovoan'i Allo Google Assistant izy io, izay ampahany lehibe amin'ny Android sy Google amin'ny ankapobeny mandritra ny taona vitsivitsy. Manolotra fampahalalana mahasoa sy rohy mankany amin'ny fampahalalana ara-nofo sy ny valiny voajanahary amin'ny kofehin'ilay resaka. Raha manontany momba ny toetr'andro ianao, ohatra, rahampitso, dia hisy valiny voajanahary toy ny hoe miresaka amin'ny olona ianao. Izy io dia mpanampy amin'ny chat izay azonao ampiasaina amin'ny fotoana rehetra mandritra ny resaka.
Manomboha amin'i Allo
Amin'ny alàlan'ny fanananao ny Google Assistant ho mpiorina voalohany an'ity fampiharana ity, manomboka amin'ny fotoana handefasanao ny Allo dia azonao atao izany toy ny varavarankely resadresaka hafa miaraka amina contact. Raha tsindrio eo ianao, dia handray anao izy ary hangataka anao hanome alalana azy hampiasa ny fitaovana GPS hitadiavana anao ary hanolotra fampahalalana marina kokoa.
Vita izao, Google Assistant hanolotra karatra maromaro izay manondro ireo andiana fanontaniana azonao apetraka mifandraika amin'ny trano fisakafoanana, fanontaniana momba ny fahalalana amin'ny ankapobeny, hetsika (apetraho ny fampahatsiahivana / fanairana), ny toetr'andro, ny fanatanjahan-tena, ny dia, ny dikanteny, ny vaovao ary koa ireo zavatra mahatsikaiky toy ny horonan-tsary, sary ary vazivazy. Ny mpanampy dia hiezaka ny hanome vaovao isan-karazany amin'ny fampiononana amin'ny firesahana amin'ny olona iray mba hahafahan'ny roa aminareo mahazo miditra amin'ilay resaka.
Allo dia manana Bokotra FAB hita eo ankavanan'ny farany ambany izany dia hitondra anao any amin'ny efijery vaovao izay hanananao ny fifandraisana rehetra sy ny fahaizana manomboka resadresaka ifanaovana, resaka incognito na fanokafana ny resaka miaraka amin'ny Google Assistant. Misy ihany koa ny tontonana fitetezana ny sisiny izay misokatra miaraka amin'ny swipe mba handehanana any amin'ny mombamomba, ny fifandraisana sy ny fanakanana voasakana. Ity farany dia mamela anao hampihetsika ny feon'ireo hafatra, fampandrenesana, hanova ny feony, hovitrovitra ary hampidina rakitra multimedia foana.
Google Allo dia amin'ny andro voalohany ary mba hanombohana resadresaka amin'ny mpanampy dia mila mampiasa ny teny Anglo-Saxon ianao. Amin'ny fotoana ahazoana azy io avy amin'ny Google Play Store, Google Assistant dia azo antoka fa hovelomina, izay misy ireo baikon'ny feo rehetra ampiasaintsika matetika ao amin'ny Google Now, ka ho raharaha ora maro io afaka miresaka ara-dalàna amin'ny mpanampy isika.
Azonao atao ny misintona azy io ao amin'ny Google Play Store, saingy hoy aho, raha mbola tsy anananao, ampidino ny APK eto ambany mba hanana an'i Allo amin'ny finday avo lenta findainao ary hampirisika ny namanao sy ny olona mifandray aminao hampiasa azy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fampiharana Android » [APK] Efa manana Allo izahay, misintoma ny fampiharana fandefasan-kafatra Google vaovao izao
Eny, ao amin'ny android-ko mametraka posimamente !!!!
Andramo apetraka ny APK!
Ny lozisialy Doogee F7 miaraka amin'ny Helio X20 dia hamely ny tsena amin'ny fihenam-bidy hatramin'ny 50 euro
Desire 10 Pro sy Desire 10 Fiainana, ny vaovao avy amin'ny HTC